Budata Journey of 1000 Stars APK maka Android
Budata Journey of 1000 Stars
Free Budata maka Android (27.00 MB)
Budata Journey of 1000 Stars,
Njem nke 1000 Stars so na egwuregwu ị kwesịrị ịdị na-arụsi ọrụ ike mgbe niile. Nanya, ọ dị anya nazụ egwuregwu taa, mana ọ bụ mmepụta na ị ga-eri ahụ nke ukwuu mgbe ịmalitere egwu.
Anyị na-awụlikwa elu nígwé ojii na-akpali odide na-akwụ ụgwọ egwuregwu maka gam akporo ikpo okwu. Anyị na-esi notu ígwé ojii na-awụlikwa elu mgbe nile iji nakọta kpakpando. Ebee ka ihe isi ike dị na nke ahụ? Azịza nke ajụjụ ahụ na-apụta mgbe ịchịkọta kpakpando ole na ole. Ka ị na-awụgharị nígwé ojii na-apụ nanya noge ọ bụla, ihe e kere eke yiri gị na-apụta gburugburu gị. Ọ na-esiri ike ịnakọta kpakpando nakụghị ha. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike iru kpakpando ndị na-apụta nebe dị iche iche, ọ bụghị imetụ ihe ndị e kere eke aka na-eme ka ọrụ ahụ sie ike karị.
Na egwuregwu ebe ị ga-enwe obi ụtọ mgbe ị ruru ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ihe niile ị ga-eme ka ịwụ elu, na-ahapụ egwurugwu nazụ gị, bụ imetụ ntụziaka ahụ aka mgbe igwe ojii pụtara. Mgbe ị na-eme nke a, ị gaghị anọ nigwe ojii, nke na-eme ka egwuregwu ahụ na-atọ ụtọ.
Journey of 1000 Stars Ụdịdị